တရုတ်ယောကျာ်းကို မယူရင် အတူအိပ်ပေးရမည်၊ ငြင်းဆန်လျှင် ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခံရမည်ဟူသော ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြင့် ရောင်းစားခံလိုက်ရသော သားအမိ ၃ဦးကို ပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင်ပြီ •
မူဆယ်၊ ဇွန် ၁၄ (သတင်းတမန်)
တရုတ်ယောကျာ်းကို မယူပါက အတူတူအိပ်ပေးရမည်၊ ယင်းအပေါ် ငြင်းဆန်လျှင် ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်ခံရမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံရပြီး…..
တရုတ်ယောကျာ်းထံရောင်းစားခံလိုက်ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား သားအမိ ၃ ဦးကို ပြန်လည်ကယ်တင်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း မူဆယ်ခရိုင် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနိမ့်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရသည်….
အဆိုပါ လူကုန်ကူးရောင်းစားခံရသူ သားအမိ ၃ ဦးမှာ ရှမ်းပြည်နယ် ကွတ်ခိုင်မြို့ မုန်းယုအုပ်စု တာခိုင်ဟော့ကျေးရွာမှ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် မချိန်ယွင်ရှမ်း(ခ)မချိန်ရှမ်း ဆိုသူနှင့်…..
၎င်း၏ သား ၂ဦးဖြစ်သူ အသက် ၄ နှစ်အရွယ် မောင်ခွမ်တာဝမ်နှင့် အသက် ၁ နှစ်အရွယ် မောင်ခွမ်တာရှင်း တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်….
၎င်းတို့ သားအမိ ၃ ဦးတွင် မချိန်ယွင်ရှမ်းနှင့် သားအငယ် ကို ဇွန် ၆ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် လုံလင်မြို့နယ် ကျိန်းအမ်းရွာရှိ ရှောက်မုန်လင် ဆိုသော တရုတ်အမျိုးသားတစ်ဦးထံတွင် ရောင်းစားခံထားရချိန်…..
ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး သားအကြီး ဖြစ်သူကို ဇွန် ၅ ရက်နေ့က ထိန်ချုံးးမြို့ရှိ တရုတ်မိသားစုတစ်စုထံတွင် ပြန်လည်ရှာဖွေကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရသည်….
၎င်း တို့ ၃ ဦးကို ရောင်းစားခဲ့သည့် သူ ၃ ဦးမှာ မချိန်ယွင်ရှမ်း ၏ ငယ်သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော မလီမိန်ကျိန်း နှင့် မောင်လီရှင်းဖ (လီရှင်းဖ ၏ ဇနီး မရန်မြင့်ရီ ) တို့ မောင်နှမ တို့ဖြစ်ကြောင်း မချိန်ယွင်ရှမ်း၏ ထွက်ဆိုချက်အပေါ် သိရသည်….
အဆိုပါ ရောင်းစားခံရသော သားအမိ ၃ ဦးကို မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီး ပြန်လည်ရှာဖွေခဲ့ကာ ဇွန် ၁၃ ရက်နေ့တွင် မူဆယ်မြို့ မြန်မာ-တရုတ် ဂိတ်ပေါက် နန်းတော်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း လူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရသည်….
လူကုန်ကူးပြီး တရုတ်ထံသို့ ရောင်းစားခဲ့သည့် မောင်လီရှင်းမ နှင့် သူ၏ဇနီး မရန်မြင့်ရီတို့ကို ဖမ်းဆီးရမိထားပြီး မလီမိန်ကျိန်းကို ဖမ်းဆီးရမိနိုင်ရန် တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်….
ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သော မချိန်ယွင်ရှမ်း ကို မေးမြန်းရာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာ မူးယစ်ဆေးစွဲနေပြီး မကြာခဏနှိပ်စက်ကြောင်း၊ ယင်းအချိန်တွင် သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသော မလီမိန်ကျိန်း နှင့် မောင်လီရှင်းဖ၊ မရန်မြင့်ရီ တို့ မကြာခဏရောက်ရှိလာပြီး တရုတ်ယောကျာ်းယူရန် တိုက်တွန်းပြောဆိုကြောင်း….
သို့သော် ၎င်းတို့ ပြောသကဲ့သို့ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် မတ် ၂ ရက် နေ့တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူက မူးယစ်ဆေးဖိုးတောင်းရာ မပေးနိုင်သဖြင့် ရန်ဖြစ်ရကြောင်း….
ယင်းအချိန်တွင် မလီမိန်ကျိန်း နှင့် ၎င်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တရုတ်နိုင်ငံသား ရန်ယုံတဲ့၊ မောင်လီရှင်းဖ နှင့် ၎င်း ၏ဇနီးဖြစ်သူ မရန်မြင့်ရီ တို့ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး တရုတ်ယောကျာ်းယူရန်ပြောပြီး လာရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ထွက်ဆိုကြောင်းသိရသည်….
ယင်းနောက် တရုတ်နိုင်ငံ ကျယ်ရှန်မြို့ရှိ မလီမိန်ကျိန်း၏နေအိမ်သို့ရောက်ရှိပြီး သမီးအကြီးဆုံူးဖြစ်သူကို မလီမိန်ကျိန်းက ခေါ်ဆောင်ထားကာ ကျန် သားအမိ ၃ ဦးကို တရုတ်နိုင်ငံတွင်းရှိ နေရာ ၂ ခုသို့ ခွဲခြမ်းရောင်းစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုချက်အရသိရသည်….
မလီမိန်ကျိန်း၏ နေအိမ်တွင် နေထိုင်ခဲ့သည့် ၂ လအတွင်း တရုတ်ယောကျာ်းယူရန် စည်းရုံးတိုက်တွန်းမှုများစွာရှိခဲ့ပြီး မလီမိန်ကျိန်း၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တရုတ်နိုင်ငံသား ရန်ယုံတဲ့ မှာလည်း တရုတ်ယောကျာ်းကို မယူပါက ၎င်း၏ ဇနီးမယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပေးရမည်…..
အလိုမတူဘဲငြင်းဆန်နေပါက ဓားဖြင့် ခုတ်သတ်မည်ဟု ကြိမ်းမောင်းခြိမ်းခြောက်သဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့ သဘောဆန္ဒအလျောက် ရောင်းစားခံရပြီး တရုတ်ယောကျာ်းယူခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်…..
လက်ရှိတွင် အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျူးလွန်သူများဖြစ်သော မောင်လီရှင်းဖ နှင့် မရန်မြင့်ရီ တို့ကို နမ့်ခမ်းမြို့မရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရသည်….
တရုတျယောကျြားကို မယူရငျ အတူအိပျပေးရမညျ၊ ငွငျးဆနျလြှငျ ဓားဖွငျ့ ခုတျသတျခံရမညျဟူသော ခွိမျးခွောကျမှုမြားဖွငျ့ ရောငျးစားခံလိုကျရသော သားအမိ ၃ဦးကို ပွနျလညျကယျဆယျနိုငျပွီ
မူဆယျ၊ ဇှနျ ၁၄ (သတငျးတမနျ)
တရုတျယောကျြားကို မယူပါက အတူတူအိပျပေးရမညျ၊ ယငျးအပျေါ ငွငျးဆနျလြှငျ ဓားဖွငျ့ ခုတျသတျခံရမညျဟု ခွိမျးခွောကျခံရပွီး…..
တရုတျယောကျြားထံရောငျးစားခံလိုကျရသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသား သားအမိ ၃ ဦးကို ပွနျလညျကယျတငျလိုကျနိုငျပွီဖွဈကွောငျး မူဆယျခရိုငျ လူကုနျကူးမှုတားဆီးနိမျ့နငျးရေးရဲတပျဖှဲ့ထံမှသိရသညျ….
အဆိုပါ လူကုနျကူးရောငျးစားခံရသူ သားအမိ ၃ ဦးမှာ ရှမျးပွညျနယျ ကှတျခိုငျမွို့ မုနျးယုအုပျစု တာခိုငျဟော့ကြေးရှာမှ အသကျ ၃၁ နှဈအရှယျ မခြိနျယှငျရှမျး(ခ)မခြိနျရှမျး ဆိုသူနှငျ့…..
၎င်းငျး၏ သား ၂ဦးဖွဈသူ အသကျ ၄ နှဈအရှယျ မောငျခှမျတာဝမျနှငျ့ အသကျ ၁ နှဈအရှယျ မောငျခှမျတာရှငျး တို့ဖွဈကွောငျးသိရသညျ….
၎င်းငျးတို့ သားအမိ ၃ ဦးတှငျ မခြိနျယှငျရှမျးနှငျ့ သားအငယျ ကို ဇှနျ ၆ ရကျနကေ့ တရုတျနိုငျငံ ယူနနျပွညျနယျ လုံလငျမွို့နယျ ကြိနျးအမျးရှာရှိ ရှောကျမုနျလငျ ဆိုသော တရုတျအမြိုးသားတဈဦးထံတှငျ ရောငျးစားခံထားရခြိနျ…..
ကယျတငျနိုငျခဲ့ပွီး သားအကွီး ဖွဈသူကို ဇှနျ ၅ ရကျနကေ့ ထိနျခြုံးးမွို့ရှိ တရုတျမိသားစုတဈစုထံတှငျ ပွနျလညျရှာဖှကေယျဆယျနိုငျခဲ့ကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့ထံမှသိရသညျ….
၎င်းငျး တို့ ၃ ဦးကို ရောငျးစားခဲ့သညျ့ သူ ၃ ဦးမှာ မခြိနျယှငျရှမျး ၏ ငယျသူငယျခငျြးမြားဖွဈသော မလီမိနျကြိနျး နှငျ့ မောငျလီရှငျးဖ (လီရှငျးဖ ၏ ဇနီး မရနျမွငျ့ရီ ) တို့ မောငျနှမ တို့ဖွဈကွောငျး မခြိနျယှငျရှမျး၏ ထှကျဆိုခကျြအပျေါ သိရသညျ….
အဆိုပါ ရောငျးစားခံရသော သားအမိ ၃ ဦးကို မွနျမာရဲတပျဖှဲ့နှငျ့ တရုတျရဲတပျဖှဲ့တို့ပူးပေါငျးပွီး ပွနျလညျရှာဖှခေဲ့ကာ ဇှနျ ၁၃ ရကျနတှေ့ငျ မူဆယျမွို့ မွနျမာ-တရုတျ ဂိတျပေါကျ နနျးတျောစဈဆေးရေးဂိတျမှ တဆငျ့ မွနျမာနိုငျငံဘကျသို့ ပွနျလညျလှဲပွောငျးပေးအပျခဲ့ကွောငျး လူကုနျတားရဲတပျဖှဲ့ထံမှသိရသညျ….
လူကုနျကူးပွီး တရုတျထံသို့ ရောငျးစားခဲ့သညျ့ မောငျလီရှငျးမ နှငျ့ သူ၏ဇနီး မရနျမွငျ့ရီတို့ကို ဖမျးဆီးရမိထားပွီး မလီမိနျကြိနျးကို ဖမျးဆီးရမိနိုငျရနျ တရုတျရဲတပျဖှဲ့နှငျ့ ခြိတျဆကျဆောငျရှကျနကွေောငျး သိရသညျ….
ပွနျလညျကယျတငျနိုငျခဲ့သော မခြိနျယှငျရှမျး ကို မေးမွနျးရာ ခငျပှနျးဖွဈသူမှာ မူးယဈဆေးစှဲနပွေီး မကွာခဏနှိပျစကျကွောငျး၊ ယငျးအခြိနျတှငျ သူငယျခငျြးမြားဖွဈကွသော မလီမိနျကြိနျး နှငျ့ မောငျလီရှငျးဖ၊ မရနျမွငျ့ရီ တို့ မကွာခဏရောကျရှိလာပွီး တရုတျယောကျြားယူရနျ တိုကျတှနျးပွောဆိုကွောငျး….
သို့သျော ၎င်းငျးတို့ ပွောသကဲ့သို့ မလုပျဖွဈခဲ့ကွောငျး၊ သို့သျော မတျ ၂ ရကျ နတှေ့ငျ ခငျပှနျးဖွဈသူက မူးယဈဆေးဖိုးတောငျးရာ မပေးနိုငျသဖွငျ့ ရနျဖွဈရကွောငျး….
ယငျးအခြိနျတှငျ မလီမိနျကြိနျး နှငျ့ ၎င်းငျး ခငျပှနျးဖွဈသူ တရုတျနိုငျငံသား ရနျယုံတဲ့၊ မောငျလီရှငျးဖ နှငျ့ ၎င်းငျး ၏ဇနီးဖွဈသူ မရနျမွငျ့ရီ တို့ထပျမံရောကျရှိလာပွီး တရုတျယောကျြားယူရနျပွောပွီး လာရောကျချေါဆောငျခဲ့သညျဟု ထှကျဆိုကွောငျးသိရသညျ….
ယငျးနောကျ တရုတျနိုငျငံ ကယျြရှနျမွို့ရှိ မလီမိနျကြိနျး၏နအေိမျသို့ရောကျရှိပွီး သမီးအကွီးဆုံူးဖွဈသူကို မလီမိနျကြိနျးက ချေါဆောငျထားကာ ကနျြ သားအမိ ၃ ဦးကို တရုတျနိုငျငံတှငျးရှိ နရော ၂ ခုသို့ ခှဲခွမျးရောငျးစားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး ထှကျဆိုခကျြအရသိရသညျ….
မလီမိနျကြိနျး၏ နအေိမျတှငျ နထေိုငျခဲ့သညျ့ ၂ လအတှငျး တရုတျယောကျြားယူရနျ စညျးရုံးတိုကျတှနျးမှုမြားစှာရှိခဲ့ပွီး မလီမိနျကြိနျး၏ ခငျပှနျးဖွဈသူ တရုတျနိုငျငံသား ရနျယုံတဲ့ မှာလညျး တရုတျယောကျြားကို မယူပါက ၎င်းငျး၏ ဇနီးမယားအဖွဈပေါငျးသငျးနထေိုငျပေးရမညျ…..
အလိုမတူဘဲငွငျးဆနျနပေါက ဓားဖွငျ့ ခုတျသတျမညျဟု ကွိမျးမောငျးခွိမျးခွောကျသဖွငျ့ နောကျဆုံးတှငျ ၎င်းငျးတို့ သဘောဆန်ဒအလြောကျ ရောငျးစားခံရပွီး တရုတျယောကျြားယူခဲ့ရခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ…..
လကျရှိတှငျ အဆိုပါဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ ကြူးလှနျသူမြားဖွဈသော မောငျလီရှငျးဖ နှငျ့ မရနျမွငျ့ရီ တို့ကို နမျ့ခမျးမွို့မရဲစခနျးတှငျ ဖမျးဆီးထားကွောငျးသိရသညျ….